Jiraattoonni Iroob waliigaltee Aljeersi irratti mormiif bahan - BBC News Afaan Oromoo
Jiraattoonni Iroob waliigaltee Aljeersi irratti mormiif bahan
Image copyright Mirutsi Beyene
Naannoo Tigraayiitti jiraattoonni Aanaa Iroob murtee waliigaltee Aljeersi ilaalchisuun koreen hojii raawwachuftuu ADWUI dabarsee mormuun hiriira bahan.
Kaaba biyyattiitti jiraattoota naannawa daangaa Ertiraa kan ta'an hawaasni Iroob har'a magaalaa Dowuhaanitti mormii isaanii dhaggeesisaniiru.
Hiriira kana irrattis namoonni gara kuma jaha ta'an argamuu saanii qindeessaan hiriirichaa BBC'tti himaniiru.
Murteen kunis hawaasa Iroob kan lakkoofsaan xiqqaa ta'e bakka lamatti kan hiruufi eenyuummaa keenyaaf balaadha kan jedhan mormitoonni kunneen, murtichis kan dogongoreedha jedhaniiru.
Dhaadannoowwan "Gaarreen wareegamtoota keenya itti awwaallee adda kutamee gara Ertiraa deemusaa hinfudhannu. Eenummaan keenyas murtee dogongoraan hingeedarru. Murtee eenyuummaa keenya miidhu kamiyyuu hinfudhannu,'' jedhaniifi kan biroo qabachuun mormiif bahan.
Hiriirtoota kessaa tokko Tasfaayi Shifaraa murtichi kan tasaa akka itti ta'e hima.
"Haawaasni keenya bakka lammaatti hiramnaan seenaan keenya itti fufuu hindanda'u, eenyummaan keenyas jiraachu hindanda'u,'' jechuun balaadha kan jedhan BBC'tti himaniiru.
Hirirtoonni murtee kunis kan hawaasa Iroob qofa osoo hintaanee kan ummata Itoophiyaa hundaati jedhanis, motummaanis murte dabarsee keessa deebiin akka ilaaluuf gaafataniiru.
Aaddee Izinesh Gabramasqalis guyyaa murtee kana itti dhagahan irraa qabee yaaddoo keessa galusaanii dubbatu.
Murteen taasifamee dogongora kan jedhan Aadde Izinesh, '' dhimmi ummata biyyatti hunda ilaalattu qofaa murteeffamu hinqabaatu. Dursa ummanni irratti mar'achu qabaata. Ummatni akka fudhatuufi hinfudhannee dursa baramu qabaata,'' jedhaniiru.
Hawaasni Iroobis erga guyyaa murte kana itti dhagahee kaasee rafee hinbeeku jechaa jiru.
Kana malees ummanni Iroobi guyyaa tokkolleen Ertiraa akka ta'eetti ofi yaade hinbeeku,'' jedhaniiru.
Image copyright MIRUTS BEYENE
Obbo Hagoos Gidaayi kan hiriira kana irratti qooda fudhatan, seenaa yaadachuun Iroob tasa bulchiinsa Ertiraa taatee hinbeektu jedhu.
''Warri Finfinnee jiran dhimma daangaa jiru hin beekan. Kamtu kan Ertiraa, kamimmoo kan Itoophiyaa akka tahe gargar baasanii hin beekan. Murteen fagoodhaa kennamu nuun baasu.''
Obbo Tasfaay gamasaaniin, ADWUI'n iyyannoo isaanii akka fudhatu kan gafatan wayita tahu, kun ta'u baannaan ammoo dhimmicha gara gamtaa Afriikaafi motummoota gamtoomaniitti akka geessan himu.
Ergaa Addi Bilisa Baasaa Ummata Tigree fuula feesbukii isaa irratti maxxanseen, murtee osoo ummata hinmarisifne ta'u kamiyyu hinjiraatu. Gara fuladuraattis marii ni taasifama. jedheera. Kana malees dhaabbatichi dhimmoota bu'aa ummata Tigraayiin faallaa ta'an keessa harka akka hingalfanne ibseera.
'Laga Marabii asitti lafa keenya'
Dhaabni B. J. Kamaal Galchuu jila gara Itoophiyaatti erguufi
''Tasfaahun Camadaa dhabuun gadda na keessaa hin baanedha''
''Olaantummaan ABUT kaleessa ture, har'as inuma jira''
Ibidda gamoo Gireenfeeliifi dhugaa bahumsa lammiilee Itoophiyaa
'Andaargaachaw haa hiikamu yookaan aangoon gadhiisa'
Biyyoonni Gamtoomanii buufanni ijoo Yaman banaa akka turu gaafatan
Xalayaa farra Muslimotaa biyya Ingliziitti
Waancaan Addunyaa 21ffaan Ruusiyaatti eegale
Walitti bu'iinsa Najjoo fi Mandiitti ta'een lubbuun darbe